တိတ်တဆိတ် | Sanchaung Journal
February 19, 2009 freebird	4 Comments
ငါ မူးမိုက်နေခဲ့တယ်။ ။
အမြဲခိုးကြည့်မိသူက ငါပါ။ ။
တိတ်တဆိတ်လေးပဲ မင်းအနားက ငါထွက်ခွါခဲ့တယ်
တိတ်တဆိတ်ပဲ နာကျင်မှုလေးတစ်ချို့ ငါရခဲ့တယ်။ ။
မျက်ရည်တစ်စက်က ငါ့ပါးပြင်ပေါ်လာကျတယ်။ ။
ငါ့နာကျင်မှုလေး ပါပဲကွာ။ ။
Previous Postဆုံမှတ်Next PostSanchaung Journal New Address
4 thoughts on “တိတ်တဆိတ်”
တိတ်တဆိတ် တဲ့…ကြိတ်ခံထားတာတွေ များရင်လည်း မကောင်းဘူး
အကို ဒီကဗျာလေးကို နှစ်သက်မိလို ကျွန်တော့် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်. ကျွန်တော့်ဘလောဒ့်မှာ .. အကယ်လို ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် ပြန်ဖျက်ပေးပါ့မယ် .ကျေးဇူးတင် အားပေးလျှက်
တိတ်တဆိတ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် သိပ်မကြိုက်ဘူး . ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးက ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်.ဖွင့်ထုတ်ပြဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေ. ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်သူရှိတဲ့ အတွက်ခံစားချက်ချင်းမတူတာလည်း ဖြစ်မှာပါ.တင်ထားတဲ့ကဗျာလေးကို တိတ်တဆိတ် ချစ်နေသူများအတွက် ဆို ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်
hay marn says: